I-Ego kanye nePhysical - Mytika Speak
Ikhaya / I-Ego ne-The Physical
Yini abantu abayizuza njengefa kubazali babo?
Abantu bangazuza njengefa izici nezici zomzimba kokhokho babo. Bazabela imikhuba nemikhuba yabo kususelwa kwabanye abayithintayo ...
Ngabe amehlo nezici zomzimba kunencazelo?
Zakhiwa kanjani izahlulelo?
Isigaba - I-Ego kanye nePhysical
Ikuphi ukudla okungcono kakhulu?